Pirees Sekiretariin MM obbo Nigusuu Xilaahuun turtii BBC waliin – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsPirees Sekiretariin MM obbo Nigusuu Xilaahuun turtii BBC waliin
Pirees Sekiretariin/dubbi himaan MM kaleessa sirna awwaalcha anga’oota naannoo Amaaraarratti argamuuf Baahirdaar otoo jiranii bilbillee haasofsifne.
(bbcafaanoromoo)—-Obboo Nigusuun sirni awwaalcha anga’oota naannicha iddoo maatii, fira, qondaaltonni Naannoo fi Federaaalaa argamanitti raawwatamuu dubbatani.
”Sirna gaabbiisisaa fi gaddisisaa ture, keessummoonni haasa’uf ka’anii imimmaaniin hudhamaa turan aarsaa baasaniin olitti naannoo fi biyyasaaniiif gumaachasaanii ijoollee fi keessummoonnis dubbatan.”
Laalibalattis sirni awwaalchaa jeneraal Asaamminoow Tsiggeen himuun ”Tarkaanficha kan fudhate caasaa humna tikaati,” jedhan obbo Nigusuun. Asaamminaw Tsiggeen Zanzallimaa iddoo jedhamutti ajjeeffamuu dubbatan.
Akkaataa itti raawwatame odeeffannoon dabalata akka argataniin himuuf qophii ta’u dubbatan.
Eegduu Jeneraalota ajjeesera jedhame
Sambata duraa darbe halkan Jeneraalotni lamaan rasaasaan ajjeeffamuu hordofuun biiroon MM namni ajjeesee to’atamuu ibsee ture.
Wiixata darbe koomishiinarri Poolisii Federaalaa Indaashaw Xaasoo, namni jeneeralota lamaan ajjeesse hidhamuu ibsan.
Wiixatuma galgala immoo Poolisiin Federaalaa ibsa kenne geeddaruun, eegduun ajjeechaa raawwate lubbuun akka hin jirre beeksise.
Odeffannoo wal faalleessu akkamittiin ibsitanii? jechuun gaafatamanii obbo Nigusuu Xilaahuun wayita hubachiisan ”Finfinneettis ta’e Baahirdaaritti akka tasaa balaa uumame, odeffannoon hundi yeroo tokkotti hin argamu, namoota burjaajesseera, yeroo sanatti odeffannoon miidiyaaleen kennamaa ture waan sirreeffamuu qabaachuu danda’u,” jedhan.
Ariifannaa keessaa dogoggorri akkasii mudachuu akka danda’u himan.
Shakkamaan akkamitti akka qabame fi amma eessa akka jiru gaafatamanii” Egduun jeneraalota ajjeefamanii tarkaanfii kana erga fudhate booda isaarrattis tarkaanfiin fudhatamee iddoo yaalamaa jirutti eegamaa jira ”jedhan.
”Dhimma fayyaasarratti ogeeyyiin fayyaa, caasaan nageenyaammoo eegaa jiru” jedhan. Dhimmoonni biroo fuulduratti qulqullaa’aa adeemaa jedhan.
‘Yaalii fonqolcha mootummaa’ raawwachuun namni hidhameefi miidhame meeqa?
”Namoonni to’ataman jiru lakkoofsi kun waan jijjiramuuf kana siin jechuu hin danda’u, humni addaa naannichaa fi Raayyaan Ittisa Biyyaa qindoominaan hojjataa jiru, odeeffannoosaa caasaa nageenyaatu harkaa qaba, qindaa’ee gara fuulduraatti ibsama,” jedhan.
Tajaajilli intarneetii ”yaalii fonqolcha mootummaa” kanaa hordofuun addaan cituu dubbataniiru.
Aragaawii Barihee (PhD): ”Miidhaan qaamaa narra hin geenye”